A Midsummer Night's Dream, boky iray hafa mifandray amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Rehefa avy nankafizinay ny boky mifandraika amin'ny The Adventures of Don Quixote, Touch of Classic dia miverina amin'ny entana miaraka amin'ny rindranasa vaovao natao ho ny kely indrindra amin'ny trano dia atolotra amin'ny fomba mampiala voly amin'ny tontolon'ny kolontsaina.
Ny Midsummer Night's Dream dia boky iray hafa mifanakalo izay nampiana an'ity fitambarana literatiora haisoratra ho an'ny iPad ity izay manolotra kilalao, ankamantatra ary fahagagana iray manontolo izay hiseho rehefa mamaky ny iray amin'ireo sanganasa mahafinaritra indrindra nataon'i Shakespeare izahay.
Ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, kolontsaina ary fanatanjahantena any Espana, ny ivontoerana fandalinana Cervantine any Alcalá de Henares, ary koa ny Miguel de Cervantes Virtual Library Foundation, vavahady iraisampirenena ho an'ny literatiora Hispanika nandritra ny 10 taona mahery, miaraka amin'i Andriamatoa Mario Vargas Llosa amin'ny maha filoham-pirenena azy dia nanohana ity tetikasa tokana natokana ho an'ny literatiora manerantany ity.
Raha tianao ny hifalifaly ny zanakao amin'ny iray amin'ireo sanganasa literatiora misolo tena indrindra dia araraoty ary misintona ny nofy iray alina alina ho an'ny 0,79 hatramin'ny 23 jona fotsiny. Avy eo hiakatra ho 1,59 euro ny vidiny.
Fampahalalana bebe kokoa - The Adventures of Don Quixote, ny fampiharana ny herinandro ao amin'ny App Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » A Midsummer Night's Dream, boky iray hafa azo ifandraisana ho an'ireo ankizy kely
TAKTIK, tranga mpamorona ho an'ny iPhone noforonin'ireo mpamorona ny LunaTik
Tranga hiarovana ny iPhone amin'ny rano sy ny fasika mandritra ny fahavaratra